मत्ती ६ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
६ “मानिसहरूले देखून्‌ भनेर उनीहरूको अगाडि धर्मकर्म नगर्न खुब होसियार होओ; नत्रता स्वर्गमा बस्नुहुने तिमीहरूका बुबाबाट तिमीहरूले कुनै इनाम पाउनेछैनौ।
२ यसकारण दानपुण्य गर्दा, मानिसहरूबाट प्रशंसा बटुल्न सभाघर र गल्लीहरूमा कपटीहरूले झ्याली पिटेजस्तो तिमीले चाहिं नगर्नू। म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, तिनीहरूले आफ्नो पूरा इनाम पाइसकेका हुन्छन्‌।
३ तर तिमीले दानपुण्य गर्दा तिम्रो दाहिने हातले गरेको काम तिम्रो देब्रे हातले थाह नपाओस्,
४ बरु तिम्रो दानपुण्य गुप्तमा गरिएको होस्; तब सबै कुरा देख्नुहुने तिम्रो बुबाले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ।
५ “साथै, जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ, कपटीहरूजस्तो नहुनू; किनभने तिनीहरू सभाघरमा अनि चौबाटोको छेउमा उभिएर मानिसहरूले देख्ने गरी प्रार्थना गर्न रुचाउँछन्‌। म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्छु, तिनीहरूले आफ्नो पूरा इनाम पाइसकेका हुन्छन्‌।
६ तर प्रार्थना गर्ने बेला तिमीचाहिं आफ्नो भित्री कोठामा जाऊ अनि ढोका बन्द गरेर तिम्रो अदृश्य बुबालाई प्रार्थना गर; तब सबै कुरा देख्नुहुने तिम्रो बुबाले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ।
७ प्रार्थना गर्दा अन्यजातिका मानिसहरूले जस्तै एउटै कुरा दोहोऱ्याई नराख किनभने धेरै बोल्यो भने आफ्नो सुनुवाइ हुन्छ भनी तिनीहरू सोच्छन्‌।
८ त्यसैले तिनीहरूजस्तो नहोओ किनभने तिमीहरूले माग्नुभन्दा अघिनै तिमीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर परमेश्वर, तिमीहरूका बुबालाई थाह छ।
९ “यसकारण तिमीहरूले यसरी प्रार्थना गर्नू:
“ ‘हे स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रा बुबा, तपाईंको नाम पवित्र पारियोस्।
१० तपाईंको राज्य आओस्। तपाईंको इच्छा जसरी स्वर्गमा पूरा भइरहेको छ, त्यसरी नै पृथ्वीमा पनि पूरा होस्।*
११ हामीलाई आज दिनभरिको भोजन* दिनुहोस्;
१२ र हाम्रो ऋण* क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि हाम्रा ऋणीहरूलाई * क्षमा गरेका छौं।
१३ अनि हामीलाई प्रलोभनमा पर्न नदिनुहोस् तर त्यस दुष्टबाट* छुटाउनुहोस्।’
१४ “किनकि यदि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराधहरू क्षमा गऱ्यौ भने स्वर्गमा बस्नुहुने तिमीहरूका बुबाले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ।
१५ तर यदि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराधहरू क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका बुबाले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नुहुनेछैन।
१६ “तिमीहरू उपवास बस्दा कपटीहरूले जस्तो उदास अनुहार बनाउन छोड किनभने उपवास बसिरहेको छु भनी मानिसहरूले थाह पाऊन्‌ भनेर तिनीहरू फोहोरी अनुहार लिएर बस्छन्‌। म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्छु, तिनीहरूले आफ्नो पूरा इनाम पाइसकेका हुन्छन्‌।
१७ तर उपवास बस्दा तिमीचाहिं टाउकोमा तेल लगाऊ अनि मुख धोऊ,
१८ ताकि मानिसहरूले होइन तर तिम्रो अदृश्य बुबाले तिमी उपवास बसेको थाह पाऊन्‌; तब सबै कुरा देख्नुहुने तिम्रो बुबाले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ।
१९ “आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धनसम्पत्ति थुपार्न छोडिहाल, जहाँ त्यसलाई कीरा र खियाले खान्छ अनि चोरहरूले फोरेर लैजान्छन्‌।
२० बरु, आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धनसम्पत्ति थुपार, जहाँ न कीराले न त खियाले नै खान्छ अनि चोरहरूले फोरेर पनि लैजाँदैनन्‌।
२१ किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ, त्यहीं तिम्रो मन पनि हुन्छ।
२२ “शरीरको बत्ती आँखा हो। त्यसैले यदि तिम्रो आँखा निर्मल* छ भने तिम्रो पूरै शरीर उज्यालो हुनेछ;
२३ तर यदि तिम्रो आँखा दुष्ट छ भने तिम्रो पूरै शरीर अँध्यारो हुनेछ। यदि तिम्रो आँखा नै अँध्यारो छ भने तिम्रो शरीर झन्‌ कत्ति अँध्यारो होला!
२४ “कोही पनि दुई मालिकको दास बन्न सक्दैन; किनकि उसले एक जनालाई घृणा र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ अथवा ऊ एक जनासित टाँसिनेछ र अर्कोलाई तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरू परमेश्वर र धनसम्पत्ति दुवैको दास बन्न सक्दैनौ।
२५ “यसकारण म तिमीहरूलाई भन्छु: के खाऔंला कि के पिऔंला भनी आफ्नो विषयमा वा के लगाऔंला भनी तिमीहरू आफ्नो शरीरको विषयमा चिन्ता गर्न छोडिहाल। के भोजनभन्दा जीवन* र लुगाफाटाभन्दा शरीर महत्त्वपूर्ण होइन र?
२६ आकाशका चराचुरुङ्‌गीलाई नियालेर हेर किनभने तिनीहरू न बीउ छर्छन्‌ न कटनी गर्छन्‌ न त धनसारमै जम्मा गर्छन्‌; तैपनि स्वर्गमा बस्नुहुने तिमीहरूका बुबाले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिमीहरू तिनीहरूभन्दा धेरै मोलका छैनौ र?
२७ तिमीहरूमध्ये कसले पो चिन्ता गरेर आफ्नो आयु एक हात लम्ब्याउन सक्छौ र?
२८ साथै, लुगाफाटाको विषयमा पनि तिमीहरू किन चिन्ता गर्छौ? मैदानका फूलहरू कसरी बढ्‌छन्‌, त्यो हेरेर पाठ सिक; तिनीहरू न परिश्रम गर्छन्‌ न त धागो कात्छन्‌;
२९ तर म तिमीहरूलाई भन्छु, सारा वैभवले सुसज्जित सुलेमानसमेत यी फूलहरूमध्ये एउटा जति पनि सिंगारिएका थिएनन्‌।
३० यदि परमेश्वरले आज देखिने अनि भोलि चुल्होमा फ्यालिने मैदानका बोटबिरुवालाई त पहिराउनुहुन्छ भने हे अल्पविश्वासीहरू हो, के उहाँले तिमीहरूलाई झनै पहिराउनुहुन्न र?
३१ त्यसैले ‘हामी के खाऔंला?’ कि ‘के पिऔंला?’ कि ‘के लगाऔंला?’ भनेर कहिल्यै चिन्ता नगर।
३२ किनकि अन्यजातिका मानिसहरू यिनै कुराका लागि दौडधूप गर्छन्‌। तर यी सब कुरा तिमीहरूलाई चाहिन्छ भनेर स्वर्गमा बस्नुहुने तिमीहरूका बुबालाई थाह छ।
३३ “यसकारण उहाँको राज्यलाई र उहाँको स्तरबमोजिमको असल कामलाई पहिलो स्थान दिइरहो अनि यी सबै कुरा तिमीहरूलाई दिइनेछ।
३४ त्यसैले भोलिको चिन्ता कहिल्यै नगर किनभने भोलिको चिन्ता भोलिले नै गर्नेछ। आजको लागि आजकै कष्ट यथेष्ट छ।
^ वा, “तपाईंको इच्छा स्वर्ग अनि पृथ्वी दुवै ठाउँमा पूरा होस्।”
^ शाब्दिक, “रोटी।”
^ वा, “पाप।”
^ वा, “हामीविरुद्ध पाप गर्नेहरूलाई।”
^ अर्थात्‌, “सैतानबाट।”
^ वा, “आँखाले एकनास हेर्छ; एउटै कुरामा केन्द्रित।”
^ ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।